Ngaba abantwana bakaGuppies bazala njani? - Okunye
Ngaba abantwana bakaGuppies bazala njani?
Ii-Guppies zingabantu abaphilayo, oko kuthetha ukuba iintsana zabo zizalwa ziphila, hayi kumaqanda njengezinye iintlobo ezininzi zeentlanzi, kubandakanya ne-goldfish. Ii-Guppies zizala ngokukhululekileyo, ngenxa yoko ungahamba ngokukhawuleza uye kwisibini esinye okanye kwi-trio uye kwi-guppies ezininzi ukuba ukhetha ukugcina abesilisa nabasetyhini kunye. Fumana ngakumbi malunga nendlela amaqabane eguppies.
Umthetho wokuzaliswa kweentlanzi eGuppy
Inkqubo yokuzalanisa ithe tye kwaye ikhanya ngokukhawuleza. Xa iimeko zilungile, i-guppy eyindoda iya kuzama ukusondela kumntu wasetyhini ngenjongo yokumfaka. Imazi kunqabile ukuba ihlale ingathathi ntweni kulo msebenzi, kwaye ihlala ibaleka kwaye kulandele ukusukela. Xa indoda isondele ngokwaneleyo, iyolula i-gonopodium yayo iye kwi-anal's vent vent.
ungayondla ntoni ufudo
Imifanekiso yeBetta yeentlanzi
Imifanekiso ka-Oscar yeentlanzi
Ngaba abantwana baGuppies bazala njani?
I-gonopodium yeyona nto iphambili endodeni. Yenziwe njengentonga kwaye yalatha kancinci, kwaye ibekwe nje emva kwamaphiko akhe. I-gonopodium iqulethe ityhubhu ehambisa iipakethi zesidoda kumfazi. Ukutshata kukaGuppy kuthatha ngaphantsi komzuzwana, kwaye kujongeka ngathi uyamhlaba kwindawo yakhe apho ikhoyo indawo yakhe. Le yindawo emnyama ngasemva kwesisu sowasetyhini.
Nangona ukuzala kukhawuleza kakhulu, iintlobo ezininzi zokuzala ziya kwenzeka ukuqinisekisa ukuba umntu obhinqileyo uchunyisiwe.
Ixesha lokumitha le-guppy liyahluka kancinci, kwaye uhlala ixesha elingakanani ekhulelwe kuxhomekeke kakhulu kwindalo yakhe. Ubude obuqhelekileyo bokukhulelwa buphakathi kweentsuku ezingama-22 nama-28. Nangona kunjalo, umntu wasetyhini unokuhlala ekhulelwe nangaphezulu ukuba amanzi akhe abanda kakhulu kuba acothisa ukukhula kweentsana, nazo Yaziwa njenge Fry . Unokulibazisa ukuhanjiswa ukuba kukho iintlanzi ezininzi kwiitanki zakhe ezimhluphayo.
indibaniselwano yemibala emibini yegumbi lokuhlala
Ukuzaliswa kwakhona kweGuppy ngamathontsi aphuma kwiseshoni yokuZala
Kuyinyani enomdla ukuba umntu wasetyhini unokuhamba ngokukhulelwa okuninzi ngokulandelelana emva kokuzala okokuqala. Unako ukugcina iipakethi zedoda eyongezelelekileyo kwindoda, ngenxa yoko kunokwenzeka ukuba azale kube kanye ngenyanga kangangeenyanga ezininzi emva kokuzalwa kweseti yokuqala yefry. Ukuhanjiswa nganye nako eyaziwa ngokuba yethontsi .
Imiqathango efanelekileyo yokuZala kweeGuppyies
Akukho nto ingako kufuneka uyenze ukuba uyafuna khuthaza abantwana bakho ukuba bazale . Nika nje le miqathango ilandelayo.
Imidlwane yintlanzi yetropiki, kwaye iqhuba kakuhle kumaqondo obushushu aphakathi kwama-75 nama-85 degrees Fahrenheit. Cwangcisa ubushushu bamanzi obungama-80 degrees Fahrenheit, kwaye oku kuya kunceda ukukhuthaza izilwanyana zakho ukuba zizale.
Ii-Guppies zinjengamanzi anzima, ke gcina i-pH phakathi ko-7.0 no-7.6.
Nika ii-guppies zakho ezintsha okanye ezinqabileyo ze-brine shrimp ukongeza kukutya kwabo kwesiqhelo kwe-flake. Yondle iintlanzi zakho kabini ngemini, kwaye ujonge ukutya abakutyayo. Akufanele unikezele ngaphezu kokutya kwimizuzu emihlanu.
Ngoku uyazi ukuba iGuppies Mate
Ngoku ukuba uqonda kakuhle ukuba ii-guppies zizala njani, kulula ukuba uqaphele xa kusenzeka. Ukuba indawo yakho yomntu obhinqileyo iqala ukukhulisa kwaye ijongeka inzima kunakuqala, unokuqiniseka ukuba ukhulelwe. Qiniseka ukuba umnika yonke into ayifunayo ukuxhasa ukukhulelwa kwakhe , kunye nendawo ekhuselekileyo yokuba nefry yakhe okanye yena kunye neetanki zakhe banokuzitya.
Uxinzelelo Slideshows Ubuxoki Ukuba Likhoboka Uthethathethwano Ring Basics Impembelelo Esezantsi Inja Ingcali Udliwanondlebe
uxela njani ukuba inja ikhulelwe
Kutheni iselfowuni zishushu
iinjana ziqala nini ukutya ukutya kunye nokusela amanzi
indlela yokwenza isoka lakho lahlukane nawe
yintoni indima katata
ubususa njani utywala emzimbeni ngokukhawuleza
iphi iiflegi ezisondeleyo ezintandathu